12 PegBoard Display Tools Hooks Shelves plank boards Winnipeg. Keep hanging punching tools Bracket Hook Hook *** New! – ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ
คุณสมบัติของแผง Peg board เจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือสำเร็จรูปตกแต่งบ้าน
4) High-Tech Production: กระดานเพ็กบอร์ดสำเร็จรูป ออกแบบให้พับขอบเก็บมุมเรียบร้อย ไม่มีรอยตัดคม วางต่อกันได้ เข้ารูปสวยงาม ทำให้ปลอดภัยในการใช้งาน ใช้ในการตกแต่งห้อง เก็บของให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงาม Sales Package Promotion “Pegboard + Hooks”
Pegboard ເປັນເຫຼັກແຜ່ນກະດານ peg, ໄມ້ຫຼື papier ຂຸມຂະຫນາດນ້ອຍໄດ້ຖືກເຈາະໃນທົ່ວແຜ່ນໃນການໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ສໍາລັບຫ້ອຍສິ່ງ. ຈັດເກັບລາຍການ ຮັກສາການຈັດຕັ້ງ ແລະປະຫຍັດພື້ນທີ່ໃນຫ້ອງ. ຊຶ່ງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈັດເກັບສິ່ງຕ່າງໆ. ອຸປະກອນເຮືອນຄົວທັງສອງ. ເຄື່ອງມື ລວມທັງເຄື່ອງຂຽນ. Same ບາງຄົນບໍ່ໄດ້ຕົກແຕ່ງຫຍັງອີກ. ປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນດິບ ເພື່ອຮັກສາເອກະລັກຂອງຕົນຂອງອຸດສາຫະກໍາມັນເຢັນ, ໃນຂະນະທີ່ບາງການຕົກແຕ່ງທາສີແລະ decorated ກັບພືດປະດັບທີ່ສວຍງາມ. ການນໍາໃຊ້ສີຂອງ Pegboard ເຮັດໃຫ້ມັນເບິ່ງງາມເຊັ່ນກັນ. ມັນກໍ່ກາຍເປັນເຮືອນທີ່ສວຍງາມ. ຢູ່ກັບຂ້ອຍແລ້ວ
CHANCON PROFILE / CHANNON PRODUCTS ຜູ້ຜະລິດຄຸນສົມບັດ Channel ຜູ້ຊ່ຽວຊານກໍາແພງການຄວບຄຸມຫມູ່ຄະນະໂລຫະ pegboard ແລະ slotted ເປັນຫມູ່ຄະນະຄະນະກໍາມະເຄື່ອງມືແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດໃນລະດັບໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການເກັບຮັກສາເຄື່ອງມື pegboard ແລະອົງການຈັດຕັ້ງ. Wall Control pegboard separates ຕົວຂອງມັນເອງຈາກການແຂ່ງຂັນໂດຍການເປັນດີກວ່າໃນຄວາມທົນທານ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມຄ່ອງຕົວ. ສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງ, ແລະຮູບລັກສະນະ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດແນວໃດ Wall ຄວບຄຸມຫມູ່ຄະນະ pegboard ສະເຫນີການເກັບຮັກສາເຄື່ອງມື pegboard ດີກວ່າ, ແຕ່ pegboards ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງນີ້ໃນມູນຄ່າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ໂດຍໃຊ້ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ໄປຫາຮ້ານແລະຊື້ທັງຫມົດຂອງໂຄງຮ່າງການ, ຮາດແວ, ແລະອຸປະກອນທີ່. ຈໍາເປັນໃນການວາງສາຍ ugly, masonite ອາຍຸຫລືແຜ່ນ pegboard ຢາງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການສໍາເລັດການຕິດຕັ້ງ pegboard Wall ຄວບຄຸມຂອງທ່ານແລະມີແນວໂນ້ມວ່າການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫນ້ອຍເນື່ອງຈາກວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຖືກຕ້ອງໃນຫ້ອງດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານີ້ ,.ມີກໍາແພງຫີນ Wall Control ທ່ານຈະມີ pegboard ທີ່ຖືກອອກແບບແລະຮັບປະກັນໃຫ້ມີຊີວິດຕະຫຼອດຊີວິດດັ່ງນັ້ນມັນຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນແທນ.
ຮາດແວ Hanger ມາຢູ່ໃນຫຼາຍຮູບແບບແລະຂະຫນາດ, ຈາກພື້ນຖານ U, L ສໍາລັບການ hanging ເຄື່ອງມືດຽວກັບ hangers ສອງທ່ອນສໍາລັບ hammers ແລະມາດຕະຖານເຖິງ shelf. ທ່ານສາມາດຊື້ hangers ປະເພດຕ່າງໆໃນຫຼັກຊັບຫຼືຫຼັກຊັບທີ່ຂຶ້ນກັບປະເພດທີ່ທ່ານມັກຈະໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຈັດກິດຈະກໍາໃດໆທີ່ມີ Pegboard: ຄວາມຄິດແລະຄໍາແນະນໍາ Pegboard ແມ່ນຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ – ຕາຕະລາງ, hooks, doodads, ທ່ານຊື່ມັນ. ທຸກເຄື່ອງມືໃນຮ້ານຮາດແວແມ່ນຫ້ອຍຢູ່ເທິງປອກເປືອກ. ທຸກໆຖົງໂລຫະ, ຖົງ tape ແລະເຕັກໂນໂລຢີຂອງ Tic Tacs ຢູ່ທີ່ checkout counter-pegboarded. ແມ້ກະເບື້ອງ pegboard hang ສຸດ hook pegboard. ແຕ່ວ່າມັນຄວນຈະບໍ່ແປກໃຈເລີຍ. ຮ້ານຄ້າປີກຕ້ອງການລະບົບການສະແດງທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ງ່າຍຕໍ່ການຈັດການແລະປັບປ່ຽນ – ຄຸນລັກສະນະດຽວກັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານຢູ່ເຮືອນ. ຫົວຫນ້າໄດ້ຫັນເປັນສີເຫຼືອງ Crafty, ຫ້ອງການຈັດແຈງຈັດແຈງ, ນ້ໍາເຄື່ອງຊັກຜ້າຫ້ອງ, ສິນລະປະກໍາແພງຫີນ,
Pegboard ຊ່ອງເກັບຂອງ, pegboard ໃນ shelf pegboard ຂອງສະແດງຄົ້ນຫາ Peg Board Hooks, Panel pegboard, ແບບລວດກະຕ່າໄດ້ Peg ຄົ້ນຫາ Board ຈັດກັບສໍາລັບ pegboard ໂລຫະ pegboard ອຸປະກອນເສີມ Hook ໄດ້, ວັນນະຄະດີແລະຖືວັດສະດຸ Nylon Hooks, ຊັ້ນວາງ, ກ້າ Wicker ໃນ shelf Brackets ເຊົ້າ Panels Panel
9. ເປັນ Headboard: ເອົາປອກເປືອກໄປໃນລະດັບຕໍ່ໄປໂດຍການສ້າງກະດານຫົວຫນ້າທີ່ມີປະເພດຫນຶ່ງ. ແຕ້ມມັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫ້ອງ, ເສັ້ນໄຍຫຼືເສັ້ນໄຍຜ່ານຮູຫຼືສີຮູບແບບເລຂາຄະນິດທີ່ມັກ. 10. ເປັນຫໍສະມຸດຮູບແກະສະຫຼັກ: ຕິດຕັ້ງກະດານໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຕຽງນອນຂອງທ່ານຫຼືຢູ່ຫລັງຫ້ອງນອນແລະນໍາໃຊ້ມັນເປັນກໍາແພງຫີນ. ມັນເປັນທີ່ດີເລີດສໍາລັບຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ, phobe ຜູ້ທີ່ມັກຫຼີ້ນກັບຮູບລັກຂອງກໍາແພງຫີນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
11. ເຊື່ອງມັນຢູ່ໃນບ່ອນນັ່ງ: ເນື່ອງຈາກ pegboards ແມ່ນຮາບພຽງ, ທ່ານສາມາດປັບໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ເກືອບທຸກບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ລວມທັງປະຕູສໍາລັບການເກັບຮັກສາເພີ່ມເຕີມໃນ closet ຫຼື pantry. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ມັນພ້ອມກັບໄຟລ໌, ກະຕ່າແລະເຄື່ອງມືການເກັບຮັກສາອື່ນໆ, ທ່ານມີຕົວເລືອກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຈໍາກັດ. (ຜ່ານທີ່ບ້ານແລະສວນທີ່ດີກວ່າ)
ကိုးကား Billboard ချိတ် Pegboards နှင့်ချိတ်စျေးနှုန်းဆွဲထားခြေထောက်နှင့်အတူလာကြတယ်စက်ဆွဲထား panel ကသိုလှောင်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ, အကြံအဖန်တွေချည်းအိမ်သူအိမ်သားဆွဲထားတံစို့ဘုတ်အဖွဲ့ဖောက်ထားသောမြို့ရိုးတပ်ဆင်ထား
1) စံနဲ့ Big Size: Billboard လာကြတယ် tools တွေဆွဲထား။ အထူးကြီးမားစံချိန်စံညွှန်းများအဘို့ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ ။ 50 x ကို 50-400cm မှကြီးစွာသောစတိုင်ကြီးမားသော panel ကိုအရွယ်အစားပေါင်းစပ်ဖို့က x 100-400cm 100 အစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ် ။ ဒါမှမဟုတ်တစ်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ သို့မဟုတ်ပိရမစ် သို့သော်ပုံရိပ်တွေဒီဇိုင်း
Pegboard တစ်တံစို့ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်သံမဏိ, သစ်သားသို့မဟုတ် papier သေးငယ်တဲ့အပေါက်အမှုအရာဆွဲထားအတွက်အသုံးပြုရရန် disc ကိုဖြတ်ပြီးတူးခဲ့ကြသည်။ သိုလှောင်ရေးပစ္စည်း တစ်ဦးရှုပ်ထွေးစေပါ ထိုအခါခန်းထဲမှာအာကာသကယ်တင် ဘယ်လေ့ပစ္စည်းများကိုသိုလှောင်ရန်အသုံးပြုသည်။ မီးဖိုချောင်အတွက်ကရိယာ လက် tools များ အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောစာရေးကိရိယာ အဖြစ်ကောင်းစွာ ဒါဟာနောက်တဖန်နှစ်ဆယ်ကိုမခံခဲ့ရ ကုန်ကြမ်းက Leave တချို့လှလှပပခြယ်သခြင်းနှင့်အဆင်တန်ဆာတွေနဲ့အလှဆင် refurbished နေစဉ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များင်း၏ထူးခြားတဲ့စတိုင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, ကအအေး။ အမျိုးမျိုးသောရောင်စုံ Pegboard ပြားများအသုံးပြုမှုကြောင့်လည်းသူတို့ကိုချစ်စရာကြည့်ရှုစေသည်။ သူလည်းလှပ၏အိမျဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရရန်။ ယခုငါတို့အိမျတျောကိုအလှဆင်ဖို့စိတ်ကူးကိုရောက်စေဖို့ရှိသည်, အဆင်းလှသော Pegboard လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာတွေ့မြင်ထံသို့လာကြ၏။
Shannon လေဆိပ်၏ CHANCON ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း / ထုတ်ကုန်။ channel Properties ကိုထုတ်လုပ်သူက Wall ထိန်းချုပ်ရေးသတ္တု pegboard ပြားအထူးပြုကြောင့် pegboard tool ကိုသိုလှောင်မှုနဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုမှကြွလာသောအခါ slot tool ကိုဘုတ်ပြားလူတန်းစားအတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြသည်။ အမှတ်တရထိန်းချုပ်ရေး pegboard ကြာရှည်ခံမှု, အစွမ်းသတ္တိကိုဘက်စုံအတွက်သာလွန်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုကနေကိုယ်နှိုက်ခွဲခြား။ , တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်၏လွယ်ကူခြင်း။ အမှတ်တရထိန်းချုပ်ရေး pegboard ပြားသာလွန် pegboard tool ကိုသိုလှောင်မှုပူဇော်ကြဘူးမသာပေမယ့်ဒီ pegboards တို့သည်ကြီးစွာသောတန်ဖိုးကိုမှာဒီသည်။ ထိုအချိန်ကာလအားဖြင့်သင်စတိုးဆိုင်မှ သွား. မူဘောင်, ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအပေါငျးတို့သဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဤအအဆငျပွမှေုမြား၏ထိပ်တွင်။ သင်လိုအပ်သမျှကိုလက်ျာဘက်သေတ္တာထဲတွင်ကြောင့်သင်ဖြစ်နိုင်သင့်ရဲ့အမှတ်တရထိန်းချုပ်ရေး pegboard installation နဲ့ဖွယ်ရှိပင်သုံးစွဲလျော့နည်းငွေနှင့်ပြီးဆုံးပါပြီမယ်လို့ရုပ်ဆိုးဟောင်းနွမ်း masonite သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ် pegboard စာရွက်များဆွဲထားဖို့လိုအပျ ,.အမှတ်တရထိန်းချုပ်ရေးသတ္တု pegboard နှင့်အတူသင်ကအစားထိုးလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးတစ်သက်တာနောက်ဆုံးမှဒီဇိုင်းနှင့်အာမခံသော pegboard ရပါလိမ့်မယ်။
ကြိုးကွင်းဟာ့ဒ်ဝဲသံတူနှင့်ပင်စင်စံချိန်စံညွှန်းများအဘို့ကို double-prong ကြိုးကွင်းမှတစ်ခုတည်း tool ကိုဆွဲထားများအတွက်အခြေခံဦး, L ကိုထံမှများစွာသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအတွက်လာပါတယ်။ သင်အများဆုံးအသုံးပြုဖွယ်ရှိနေအမျိုးအစားပေါ်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာတက်အတွက်မျိုးစုံကြိုးကွင်းကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ Pegboard နှင့်အတူတစ်စုံတစ်ရာ Organize: အကြံပြုချက်များနှင့်သိကောင်းစရာများ Pegboard နေရာတိုင်း-ပြား, ချိတ်, doodads, သင်ကအမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟာ့ဒ်ဝဲ store မှာတိုင်းလက် tool ကို pegboard အပေါ်ဆွဲထားသည်။ သော့ခလောက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအိတ်, ထိုကုန်ပစ္စည်းတန်ပြန် pegboarded မှာနေကြပါပြီ Tacs ၏ပြွန်တိပ်ဖြူ၏အလိပ်။ ပင် pegboard ချိတ် pegboard ချိတ်ပေါ်ချိတ်ဆွဲထားတယ်။ သို့သော်အံ့သြစရာမရှိပါအဖြစ်လာသင့်ပါတယ်။ လက်လီရောင်းသူများ, ကြံ့ခိုင်ဖွင့်မယ့် Display ကို system ကိုလိုခငျြပြန်စီရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ချက်နဲ့-သင်အိမ်တွင်သင်၏အလုပ်နေရာများအတွက်လိုအပ်တူညီတဲ့အရည်အသွေးတွေ။ Headboard အဝါရောင်လိမ္မာသည် ဖြစ်. ရုံးအံဆွဲမီနူးစီစဉ်, ရေအဝတ်လျှော်တဲ့အခန်းမြို့ရိုးကိုအနုပညာ, လက်ဝါးကပ်တိုင်ချုပ်အင်္ကျီကြိုးကွင်း Office ကိုဗီရိုကိုဖွင့် ,.
Pegboard Bins, အစင်သတ္တု pegboard အဆိုပါ Hook ဆက်စပ်ပစ္စည်း, စာပေနှင့်ရှင်အိမ်ရာပစ္စည်းနိုင်လွန်ချိတ်, စင်ပေါ်, Wicker ခြင်းတောင်းဟာစင် bracket ခြင်းတောင်း Panel များ Panel ကို pegboard အဘို့နှင့်အတူတောင်းသည့်တံစို့ရှာဖွေရေးဘုတ်အဖွဲ့စည်းရုံးရေးမှူးစတိုင်ဝါယာကြိုး, အတံစို့ရှာဖွေရေးဘုတ်အဖွဲ့ချိတ်, pegboard Panel ကို Display ရဲ့ pegboard pegboard
14. တစ်ဦးငွေကောက်ခံပြသရန်: ဒီနေရာမှာတစ်ဦး pegboard ကျောက်စုဆောင်းခြင်းဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်သင်တွေအများကြီးရှိသည်ဆို trinkets များအတွက်အသုံးပြုရန်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာတစ်ရိုးရှင်းပြီးပျော်စရာလမ်းဖွင့် သငျသညျမှာကြည့်ဖို့ကိုချစ်ငယ်သောအရာတို့ကိုပယ်ပြသပါ။
Pegboard တံစို့ဘုတ်အဖွဲ့ Display ကို Panel ကို Bins ခြင်းတောင်းစင်၏ သိုလှောင်မှုစည်းရုံးရေးမှူး angle Pegboard ချိတ်နှင့် J Pegboard Hook Pegboard ဟက် display နှင့် Pegboard Cap ပြစူပါ Duty Pegboard Hook Slatbox Pegboard Display ကို Bins Pegboard အဝတ်အစား Pegboard Tool ကို Pegboard acrylic Bins Pegboard ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများနှင့် Pegboard သင်္ကေတပြရှင် Pegboard ကြမ်းပြင်ကိုဖေါ်ပြရန်ဖြစ်ပေါ်လာသော။ အထူး pegboard <br> ပြသမှုဟာဟာ့ဒ်ဝဲ mounting Display ရဲ့ pegboard – နောက်ဟင်းပွဲများအဆိုပါ pegboard Specials အမိန့်ဟာဟာ့ဒ်ဝဲ pegboard pegboard စင်ပေါ်သင့်မူလစာမျက်နှာစေရန်, အဖွဲ့အစည်း Add နိုင်သလား။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စင်ပေါ်စေသောအခါ, သငျသညျ သငျသညျခငျြသမြှကိုအရွယ်အစားကသူတို့ကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကထုံးစံမထိုက်မတန်သူတို့ကိုသင်ထားခွင့်ပြု သင့်အိမ်သို့မဟုတ်အလုပ်ရုံများတွင်မဆိုတည်နေရာ၌တည်၏။